Google Drayivu inogadziridzwa kuti ifambise shanduko kubva kuIOS kuenda Android | IPhone nhau
Google Drayivu inogadziridzwa kuti ifambise shanduko kubva kuIOS kuenda kuApple
Makore mashoma apfuura, Apple yakatanga chishandiso chitsva chakabvumidza vashandisi veApple kutamisa zvese zvirimo kubva kune yavo Android smartphone kuenda kune iPhone, kunze kwezvinhu zvakachengetedzwa ne DRM, senge nziyo, mafirimu, mabhuku ... Zvinoenderana neApple iyi nyowani Chishandiso chakatendera iyo Cupertino-based kambani kuti iwane nhamba hombe yevashandisi kubva papuratifomu inokwikwidza. Parizvino Google ine mugove wepasi rose wemusika unosvika 90%, asi kunyangwe zvakadaro, zvinoita sekunge haidi kurasikirwa nevashandisi uye ichangobva kugadzirisa iyo Google Drayivu kunyorera yeIOS, ichiwedzera imwe sarudzo nyowani inobvumidza kuendesa zvese zviri mukati meiyo iPhone kune Android mudziyo, kunze kwezvinhu zvakachengetedzwa ne DRM.
Kuti uwane iri basa tinofanirwa kuenda kuMenu yeMenu uye tinya paGadzira backup. Panguva iyoyo, data rese ratinogona kuchinjisa rakananga kune yedu Android kifaa rinoonekwa, pakati payo pane avo vanofambidzana, zviitiko zvekarenda nemifananidzo nemavhidhiyo atakachengetera. Kuti uite izvi, izvo zvinogona kutora maawa akati wandei, Iko kunyorera kunokurudzira kuti tisiye chimbo ichichaja apo chishandiso chiri kushanda uye kuti zvine musoro tinozviita patinenge takabatana kune network yeWi-Fi.
Kusvikira kuvhurwa kwechinhu chitsva ichi, iyo yega sarudzo yeku kukwanisa kuita kutama kwaive kuburikidza neyechitatu-bato kunyorera, mune imwe nzira yakaoma iyo yaida kuve nekombuta iripedyo, kuti ukwanise kufambisa zvese mifananidzo nemavhidhiyo kuenda kune chishandiso chitsva, chimwe chinhu icho nekuda kweichi chitsva basa hachichadiwi.
Vashandisi vePixel nyowani nePixel XL vane application yechinyakare inonzi Quick switch Adapter, iyo yaibvumidza vashandisi ve iPhone kufambisa ruzivo rwavo rwese kune iyo Google terminal nyowani, asi chishandiso ichi chaingoenderana chete nemaPixels matsva. Kana iwe uchironga kuita shanduko, iwe unofanirwa kudzima iMessage, kudzivirira iyo SMS yavanokutumira kuti usarasike munzira, dambudziko rave riripo kuApple kwemakore akati wandei uye risati ragadziriswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google Drayivu inogadziridzwa kuti ifambise shanduko kubva kuIOS kuenda kuApple
South Korea Inogona Kuongorora iPhone 6s Matambudziko eBhatiri
Apple inoda kuti vashandisi vayo vagare kure nemanyeja ekunyepera